Cabashooyinka Guud ee Columbus, OH | Caafimaadka PW
Cabashooyinka Caadiga ah ee La Xiriira Uurka ee Columbus, OH
Guudmarka Cabashooyinka Guud
Ku dhowaad dhammaan haweenka uurka leh waxay leeyihiin qaar ka mid ah astaamahan caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ay aad u xanuun badan yihiin ama soo noqnoqdaan, u soo jeedi anaga.
Lalabbo iyo matag mararka qaarkood ah inta lagu jiro nuska hore ee uurka
Kaadida oo isdabajoog ah, taas oo inta badan ka sii daran xilliga hore iyo waqtiga dambe ee uurka (Tani waa caadi haddii aysan la socon xanaaq gubasho inta lagu jiro kaadida)
Ballaarinta naasaha iyo danqashada
Dhabar xanuun hooseeya
Xanuun wareegsan oo xanuun ah (xanuun ku dhaca caloosha hoose oo u sii gudubta aagga gumaarka): Tan waxaa lagu qaboojin karaa iyadoo la jiifsado dhinacaaga oo jilbaha loo jiido laabtaada.
Calool fadhiga: Tan waxaa lagu daaweyn karaa iyadoo la cabbo cabitaanno fara badan, jimicsi, cunista miro, iyo cunitaanka buunshaha buunshada. Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagu daro dheellitir dheeri ah, sida Metamucil® ama Caanaha Magnesia. Dawooyinka caloosha jilciya ee jilicsan waligood lama isticmaali karo inta lagu jiro uurka.
Hababka Ka Hortagga Dhabar xanuunka
Fiiro gaar ah u yeelo booskaaga iyo xoogaa jimicsiyo fudud ah oo lagu xoojinayo dhabarkaaga hoose, muruqyada caloosha iyo caloosha, iyo bowdooyinka gudaha iyo bannaanka, waxay kaa caawinayaan inaad dareento raaxo iyo firfircooni badan inta uurkaagu sii socdo.
Barnaamijka jimicsiga soo socdaa wuxuu qaadanayaa ilaa shan ilaa toban daqiiqo maalintii. Markaad awood yeelato, waxaad dooran kartaa inaad si tartiib tartiib ah u kordhisid soo noqnoqoshada. Haddii dhabarkaagu hadda xanuuno, waa inaad xoogaa xoogaa dareentaa ka dib markaad jimicsiyadaan sameyso. Haddii dhabarkaagu uusan ku xanuujin, ha sugin inuu ka bilaabmo!
U jiifso dhabarkaaga oo jilbaha laaban iyo cagaha dhulka. Ku xir gacmahaaga gadaashiisa madaxa oo kor u qaad garkaaga iyo laabtaada si toos ah, kor u qaad (ha u ruxin) madaxaaga dhulka oo qiyaastii lix ilaa siddeed inji ah. Indhahaagu waa inay kor u fiiriyaan saqafka. Qabo shan sekan: ku celi 10 jeer. Jimicsigan waxaad ka dareemi doontaa muruqyada calooshaada sare.
Dhabarka u seexo iyadoo gacmaha madaxa gadaashiisa ay ku dhegan yihiin. Madaxaaga kor u yara qaad, ka dibna jilbahaaga u laabo dhinaca laabta, adoo jilbahaaga kala fidinaya. (Haddii aad ku dhowdahay dhammaadka uurkaaga, waxaad awoodi kartaa oo keliya inaad jilbahaaga waxyar ku keento, taas oo fiican. Layligu wali wuu shaqeynayaa.) Ku celi 10 jeer. Layligani wuxuu xoojinayaa muruqyadaada hoose ee caloosha.
U jiifso dhabarka adiga oo gacmaha is haysta oo madaxa gadaashiisa ku yaal, cagahaaguna dhulka ku yaal iyo jilbahaaguba oo kala baxsan. Jilbahaaga ha ku soo dhacaan dhinac, ka dibna madaxaaga kor u qaad si toos ah, qiyaastii shan ama lix inji, iyadoo indhahaagu u jeedaan saqafka. Ku celi 10 jeer dhinac kasta. Layligani wuxuu xoojinayaa muruqyada dhinaca ee ku dheggan feerahaaga iyo lafta misigta sare.
U jiifso dhinac jirkaaga oo toosan, kuna tiirsan gacanta hoose iyo xusulka si aad u taageerto jirkaaga kore. Adoo cagahaaga laalaaban, lugta kore kor u soo qaad oo toos kor u dhaaf illaa lix inji, ka dibna hoos u dhig adiga oo aan dul dhigin lugta hoose. Ku celi wiishka degdega ah ilaa 20 jeer. Kadib hoos u dhig cagahaaga jilicsan oo ku celi wiishka 20 jeer oo dheeri ah. Ka dib markaa dhig lugtaada sare, cagaha jilicsan, gadaal illaa inta ay si raaxo leh ugu socoto. Ku celi 20 jeer oo dheeraad ah ugu dambayntiina 20 jeer oo dheeri ah oo cagaha jilicsan ee hadda hoos loo tilmaamay. Ku samee jimicsi taxane ah labada lugood.
Adeegso booska bilowga ah sida jimicsiga 4, laakiin ka gudub lugta kore, adiga oo jilibka laaban iyo cagtaada dhulka. Adoo cagahaaga ka dhigaaya mid jilicsan, kor u qaad lugta hoose 20 jeer. Ku celi dhinaca kale. Waxaad ku dareemi doontaa bowdyahaaga gudaha. Dhamaadka liistada wiishka bidix, intaad weli jiifsaneyso, jilib walba u jiido laabtaada oo xaji si aad uga hortagto casiraad iyo adkeyn. Layliyo 4 iyo 5 ayaa ku fiican firidhida iyo xoojinta bowdyahaaga.
U jiifso dhabarkaaga oo jilbahaaga laaban, lugaha oo kala baxsan iyo cagaha dhulka. Gacmahaaga saar dhinacyadaada. Miskahaaga kor uga qaad sagxadda dhulka, ka dibna hoos u soo deji adigoon taaban dhulka inta lagu jiro wiishka. Ku celi 10 jeer. Kadib ku celi jimicsiga 10 jeer adoo jilbahaaga isku riixaya. Layligan waxaad ka dareemaysaa dhabarkaaga hoose, badhida iyo bowdyahaaga.
Is dul dhig gacmahaaga iyo jilbahaaga iyadoo gacmahaaga iyo bowdyahaaga ay ku xiran yihiin sagxadda dhulka iyo jilbahaaga oo si raaxo leh u kala fog. Marka hore, u oggolow dhabarkaaga hoose iyo caloosha inay u fooraraan xagga sagxadda. Kadib dhabarkaaga kor ugu taag heerka, oo adkee badhidaada ilaa dhabarkaaga hoose uu ka laabmayo kor (sida bisad gadaal gadaal u riixaysa). Isdeji si heer ah, ka dibna u oggolow dhabarka iyo caloosha in ay mar labaad isqabtaan. Ku celi 20 jeer. Dhaqdhaqaaqa waa inuu noqdaa mid isdaba-joog ah, gaabis ah oo ruxruxa sida.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ama walaac dheeraad ah, fadlan weydii adeeg bixiye booqashadaada soo socota.
Calaamadaha Khatarta ah
Calaamadahaasi iyo astaamahani waxay muujin karaan dhibaato uurkaaga ku jirta. Haddii aad isku aragto mid ka mid ah astaamahan, fadlan isla markiiba wac xafiiska:
Dhiigbaxa siilka. Isla markiiba na soo wac haddii aad dhiig bax u bilowdo sida caadada oo kale. Uma baahnid inaad na soo wacdid haddii aad qabtid bandhigga dhiigga (xabka dhiigga leh) goor dambe oo uur ah. Tani waa wax caadi ah waxayna caadi ahaan ka dhigan tahay inaad foolaneyso dhowaan.
Matag joogto ah iyo / ama shuban.
Barar lama filaan ah ama daran oo wajiga ama gacmaha ah
Madax xanuun daran oo joogto ah.
Isbedelada aragga sida aragga oo xumaada, dawakhaad ama dhibco indhaha ka horreeya.
Qabow iyo qandho ka badan 101 darajo.
Xanuun caloosha oo kadis ah, fiiqan ama qaafiya ah.
Dareer kadis ah oo ka imanaya siilka.
Xanuunka siilka, cuncunka, ur xun ama nabarro.
Gubasho ama cadaadis kaadi.
Furuq ama finan.
Neefsasho daran oo wadno qabad leh (wadno garaac degdeg ah ama aan caadi ahayn).
Foosha joogtada ah ee socotaa 30 illaa 40 ilbiriqsi.
Cabashooyinka caadiga ah FAQ
Lalabbo ma ku badan tahay xilliga uurka?
Lalabbo iyo matag aad bay u badan karaan xilliga uurka hore. Tan waxaa lagu magacaabaa jirro subaxnimo, waxayna kaa dhigi kartaa inaad aad u xanuunsato, taasoo kaa ilaalinaysa inaad wax cunto oo aad cuntada hoos u dhigto. Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay ku siin karaan habab fudud, guriga dhexdiisa si looga hortago lallabada iyo sidoo kale daawooyinka ku caawin kara. Waydii OG/BYNs wixii faahfaahin ah inta lagu jiro wada tashi
Maxaa dhacaya haddii dhibatada dhabarka ay sii socoto?
Sida ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo dhabar xanuunka uurku sabab u yahay waa jimicsiyo fudud. Haddii aadan hubin sida loo sameeyo dhaqdhaqaaqyada kor ku xusan, xubnaha kooxdeena ayaa kula tusi kara waxayna ku siin karaan talo si aad uga faa'iideysato. Haddii jimicsiyada dhabarka ee joogtada ahi aysan u muuqan inay shaqeynayaan, waxaa laga yaabaa inaan kuu qori karno daawooyin si loo yareeyo xanuunka ama aan u gudbino takhasusle.
Maxaa loo arkaa xaalad degdeg ah?
Calaamadaha halista ah sida dhiig-baxa siilka oo dheeraad ah, matag joogto ah iyo/ama shuban, iyo xanuun daran oo lama filaan ah ayaa loo arkaa xaalado degdeg ah waxayna u baahan yihiin daryeel degdeg ah OB/GYN. Fadlan wac xafiiskayaga Columbus, OH, si aad ballan u qabsato sida ugu dhakhsaha badan ka dib markaad la kulanto calaamadahan. Waxaan diyaar u nahay baahiyahaaga lama filaanka ah wakhti kasta.
Sababaha ugu badan ee matagga iyo / ama shubanku waa infekshannada fayraska, infekshannada bakteeriyada, sida sumowga cuntada, ama dhibaatooyinka soo raaca ee daawooyinka.
Sababaha Dhabarta Inta Uurka Leedahay
Markaad uur leedahay, isbeddelada jir ahaaneed waxay culeys saaraan lafdhabartaada, xirmooyinka ku xiran lafdhabartaada iyo miskaha, muruqyada ku hareeraysan si ay taageero u helaan.